Tontolon’ny asa manalasala, trangan’ny ‘covid-19’ mitombo isa, fihibohana - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Ao anatin’ny 15 andro fahafolo amin’ny hamehana ara-pahasalamana ny eto Madagasikara, araka ny didim-panjakana noraisina tamin’ny filan-kevitry ny minisitra ny 25 jolay 2020. Mbola mitombo manko ny tranga raha ny antotanisa ambaran’ny mpitondra teny ofisialy isan’andro ao amin’ny radio sy televiziona. Narahan’ny fihibohana roa herinandro manomboka tamin’ny alatsinainy 27 jolay 2020 izany ho an’ny faritra Analamanga, izay be tranga indrindra, araka ny nanazavan’ny praiminisitra Ntsay Christian azy, tao amin’ny radio sy televiziona ny alin’ny alahady 26 jolay 2020, nandritra ny ora iray. Ankoatra ny fanamafisana ny fepetra teo aloha, dia zava-baovao tamin’ny nambarany ny fanalavana ny fisokafan’ny tsena sy ny sehatra asa samihafa hatramin’ny 1 ora raha hatramin’ny 12 ora izany teo aloha, ho an’ny faritra Analamanga. Ny faritra sisa tsy dia nisy fiovana firy fa miankina amin’ny isam-paritra ny fepetra raisina rahefa mifampidinika amin’ny foibe nasionaly mandrindra ny fitantanana ny ‘covid-19’.
Somary nanahirana ihany ny fandraisan’ny olona ny nambaran’ny praiminisitra ny alahady 26 jolay momba ny fisokafan’ny tsena satria mbola maro ireo nisalasala tamin’ny alatsinainy 27 jolay raha tsy efa nitondra fanazavana ny minisitry ny Indostria sy ny Varotra ary ny Asa tanana, Lantosoa Rakotomalala. Nilaza ity minisitra ity fa afaka misokatra ny sehatra asa rehetra rahefa manaraka ny fepetra ara-pahasalamana, ary ankinina amin’ny mpampiasa ny fanatanterahana izany toy ny andaminana ny fitaterana.
Ny filoham-pirenena, Andry Rajoelina, niaraka tamina delegasiona ao amin’ny governemanta tamin’io alahady io dia nitsidi-paritra tany Mahajanga, nitondra fanafody sy fitaovana ho an’ny hopitaly sy ho an’ny mpiasan’ny fahasalamana. Napetraka tamin’io alahady io amin’ny toerany ny governoran’ny Faritra Boeny vao notendrena, Mokthar Andriantomanga izay ben’ny tanàna ao Mahajanga, lany tamin’ny alalan’ny Mapar. Nitohy hatrany Nosy be sy Antsiranana ny dian’ny filoha taorian’ny tao Boeny.
Ao anatin’ny tontolon’ny covid-19 ihany, araka ny nambaran’ny praiminisitra frantsay, Jean Castex, tamin’ny fampitam-baovao iraisam-pirenena, dia nosokajin’i Frantsa ho anisan’ny firenena 16 irongatan’ny valanaretina covid-19 i Madagasikara ka tsy maintsy manao fitiliana izay mpandeha avy aty, miditra any Frantsa.
Momba ny fiparitahan’ny valanaretina, dia misy avy amin’ny tsy fitandreman’ny zandary no nampitombo ireo tratran’ny tsimokaretina tao anivon’ny sekolin’ny Zandarimaria raha ny nambaran’ny Jeneraly Ravalomanana Richard, sekreteram-panjakana misahana ny Zandarimaria, tamin’ny haino aman-jery samihafa. Taorian’ny fanamarihana ny 26 jona tao Antananarivo no nitrangan’izany, izay nanararaotan’ny sasany nihaona tamin’ny fianakaviany.
Niova kely ny fitaterana ny antontanisa tato anatin’ny andro maromaro izao, ka ny fivoaran’isa amin’ny tranga vaovao sy ny sitrana ary ny lavo no asongadin’ny Profesora Vololontiana Hanta Marie Danielle mpitondra teny ofisialy, ary aseho amin’ny ‘courbe’ izay mbola hita ho miaka-midina hatreto.